Mon Mon's Diary: ရိုးရိုးမွေးခဲ့စဉ်
at 10:48 AM Posted by Myo Mon Yee Oo
so touching post
အခုလို မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက် မေးခွင့်ပြုပါ။ ကိုယ်ဝန်စရှိကတည်းကနေ မွေးတဲ့အထိ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ထဲကပဲ တာဝန်ယူကြည့်ရှု့ပေးတာလား။ ဒါမှမဟုတ် အလှည့်ကျ ဆရာဝန်တွေက ကြည့်ရှု့ပြီး၊ မွေးပေးတာလား။
မမွန်ရေ... ကိုယ်ဝန် စရှိစဉ်က မွေးဖွားပြီးတဲ့ အထိ ရေးထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးက ဗပာုသုတ ရဖွယ်ပါ။ မိဘမေတ္တာကိုလည်း ခံစားတွေ့မြင်နိုင်တယ်။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
thx for sharing experience.း) အမပြောသလိုဆို ရိုးရိုးမွေးတာ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်
ur post touch my heart!
2012 Sep လကုန်မှာ မွေးခဲ့တာ NUH မှာ ၆၉၀၀ ကုန်ပါတယ် ၊ ရိုးရိုးမွေးခဲ့တာပါ ၊ မွေးခန်းထဲ ၁၃ နာရီကြာခဲ့ပါတယ် . EP holder ပါ